Saameyn ka dhalatay xayiraadii Kenya ay kusoo rogtay Diyaaradaha Soomaaliya – SOMA: Somali Media Association
Saameyn ka dhalatay xayiraadii Kenya ay kusoo rogtay Diyaaradaha Soomaaliya
11 bishii May Kenya ayaa shaacisay in la hakiyey dhammaan duulimaayada diyaaradaha ka imaada ama tega Soomaaliya, marka laga reebo kuwa gargaarka iyo diyaaradaha gaarka ah ee la shaqeeya hay’adaha Qaramada Midoobey, waxaana ay saameyn ay ku yeelatay boqolaal ka mid ah dadka ku nool Muqdisho oo qaarkood ka shaqeysan jiray soo saarida viisayaasha iyo Tickyada dalka iyo sidoo kale dad howlo kala duwan la ahaa dalka Kenya.
Cabdicasiis Warsame oo ah maamulaha Shirkadda duulimaadyadda ee Kinwey Travel ayaa sheegay in saameyn dhaqaalle ay ku yeelatay tan iyo markii ay xayiraadda ay soo baxday.
Waxaa uu sheegay marka laga soo taggo in xafiiskooda shaqadii ka socotoy ay istaagtay in sidoo kale ay jiraan dad badan oo ay u saareen dal ku galka dalka iyo tickyo kuwaasoo ay ku timid xayiraada oo la kulmay khasaare kuwaasoo ku qabsatay in qaar ka mid ah lacagihii ay celiyeen.
Waxaa uu tilmaamay in ay jiraan tiro yar oo dad ah oo ku direen tan iyo markii ay xayiraada lagu dhawaaqay kuwaasoo oo maray qaarkood dhulka, islamarkaana Safarka dhanka dhulka kala kulmay dhibaatooyin xoog leh.
“Wlhi caqabado badan way jiraanoo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka macamiisha oo ku qanacsanen inay meelo kle maraan dhanka kle waxa jira in ay joogsadeen safaradii tooska aha iyo in ay joogsaden alabihii laga keni jiray iyo kuwii loo qaadi jiray waxa so dhan way joogsaden caqabadahaas baa jira. Haa way jiraan dad ay ku dhacday in tikidyo in ay jarteen qaarkood tijaabadii covid19 iska so qaadeen ay ku dhacday, laakin hakad kaas diyaarado kale bay raaceen”
Waxaa jira sidoo kale dad badan oo ay ka baxeen lacago badan ka dib markii ay u soo safreen magaalada Muqdisho ayna ka yimaadeen Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya, waxaana ay sheegeen in labo jibaar ay ku noqotay lacagtii ay ku imaan jireen markii hore.
Faaiso Cali Maxamuud iyadana waxa ay ka mid tahay dadkii ay samesay xayiraada kenya ay kuso socday safarada ka iman jiray Soomaaliya iyo kuwii aadi jiray waxa ay ku xayirantay kenya balse waxa ay sheegtay safar dheer kadib in ay timid muqdisho safarkeedana uu uga baxay 500 dollar oo markii hore aysan ku tala galin.
Waxay ay tilmaamtay in, in kabadan lacagihii ay ku imaan jirtay Muqdisho aka baxday, maadaama ay soo martay Dalka Itoobiya, si ay Muqdisho usoo gaarto, halkaan oo xitaa waqti badan kaga lumay.
“Inan muqdisho imaado oo nerobi aan ka so tago waxa igu qaadatay waqti dheer sababto ah kenya iyo soomaaliya waxa isku so roceen xayiraado, iyadoo nagu bateen qarashaadkii aan ku imaan lahayn magalda muqdisho awal markaad muqdisho ka tagayay nerobi aadayay lacag ama qarashaad garaya ilaa 230 dolar. Hada lakiin way korortay waxay tagtay 500 iyo meelahaas marka waxayna tagee adoo 500 melaha ay kaa baxday inaad wareeg dheer marto”.
Dadkii doonayay in ay aadaan Nairobi ayaa hadda qaarkood noo sheegeen in ay qorsheyeen in ay ku baxaan safarka dhanka dhulka ah oo qaarkood ay ka muujinayaan welwel xooggan.
Maxamed Aadan oo la hadlay SOMA ayaa sheegay in uu isku diyaarinayo in uu maro safar dhanka dhulka ah si uu utago magalada Nerobi waxa uuna sheegay in uu ka gali doono dhooblay si uu u gaaro halka uu u socdo taasina ay ku sababtay qarashaadka safarka ku baxaya oo uusan awoodin madama wareeg dheer la marayo qarasha diyaarada lagu raacayana uusan awoodin.
Walaaca ugu weyn waxa uu ka muujinayaa Safarka dhulka ee Dhoobley iyo Nairobi uu ku sheegay in khatar kaga imaan karto, maadaama aysan lahayn damaanad Amni oo Boqolkiiba Boqol ah.
“Xayiraada si toos ah ayay noo samaysay maxa yeelay awal markaan halkaan ka duulo si toosa u tagi jiray nerobi lakiin hada qorshayga waxa uu yahay in in aan ku baxo safar dhanka dhulka sababtoo ah ma haayo qarashaad badan aan ku raaco diyaarada”.
WQ: Shukri Caabi oo ka mida Radio Risaala
Dhallinyarada Dhuusamareeb oo si iskaa wax u qabso u dayactiraya Waddooyinka Magaalada
Tacadiyo ka dhashay Mugdiga ka jira xerooyinka dadka soo barakacay ee Baydhabo